Kutumira Maodha - ASFO Chitoro
Kero yaunoisa paunenge uchinyoresa pawebhusaiti inozviratidza seyako kero yekutumira yekutumira yako oda. Kana iwe ukada kuti kodhi yako iendeswe kune imwe kero, iwe unongofanirwa kusarudza "Tumira kune rimwe kero" uye uise ruzivo rutsva rwekutumira.
Kana iwe uchiona zvichikodzera, iwe unogona kusiira mamwe madhizavo pamusoro pekutumira kwako mumunda "Zvinyorwa". Semuenzaniso, iwe unogona kutizivisa nezve iwe iwe kusaenda pane wechigumi nematatu, kana kuti kana pasina munhu ariko kumba panguva yekuzvitakura, tinogona kusiya yako yekudenga kuchitoro chiri padivi pacho.
Sarudza Nzira Yekutumira
Tora-up kuFesi: Sarudza iyi sarudzo kana uchigara pedyo neMaia kana uri kuronga kufamba nayo. Iyo yemahara uye iwe unongofanira kumira nePhemisi yako kuti utore yako-oda, watoenda kare kuenda. Tora mukana uye tora mishonga yako yekurapa, bvunza zano kune yedu Pharmaceutical Staff kana shandisa zvakanaka masevhisi atinokuwanira iwe. Zviri nyore kutiwana.
Kuuya Pamba: Iyi sarudzo ichaoneka chete kana iwe wakasarudza "Maia District" senzvimbo yekugara kana kuti kana iwe ukawedzera Mushonga kukaraji yako uye wakasarudza imwe yedunhu reMaia kana Oporto rakatarisana senzvimbo yekugara.
CTT (Hofisi Yekutumira) Dhirivhari: Kana iwe uchigara kure uye uchida kuendesa kumba, unogona kusarudza izvo zvinopihwa neCTT. Zvichienderana nekero yako yawakasarudza kuendesa, mari yekutumira uye nguva yekuzvitakura inosiyana seinotevera:
Continental Portugal: kuendesa: 1 kusvika 3 bhizinesi mazuva
Autonomous Regions, Azores uye Madeira: kusvika kumazuva mashanu ebhizinesi
Zororo reEurope: kutumira: Mazuva matatu kusvika mashanu ebhizinesi
Sarudza Nzira Yokubhadhara
Mitengo yese yakanyorwa inosanganisira VAT pamwero unoshanda nechisimba.
Kiredhiti Kadhi kana Paypal
Mushure mekusarudza nzira yekutumira uye yekubhadhara, iyo "Order Summary" munda uchaonekwa. Simbisa iyi inotevera ruzivo:
- Order yekutakura ruzivo uye nzira yekuendesa.
- Invoicing ruzivo uye nzira yekubhadhara.
-Pfupiso yemhando uye huwandu hwezvakarairwa zvinhu, uine zvakadzama rondedzero yezvinyorwa.
-Akakurudzira Retail Mutengo neVAT, mari yekutumira, yemhando yeVAT pamwe nehuwandu hwekupedzisira kukosha.
- Ruzivo rwekubhadhara nzira uye rumwe ruzivo runobatsira.
Kana zvese zvakaringana uye zvinoenderana nezvaunoda, unogona kuenderera nekubuda. Kutanga, iwe unofanirwa kuverenga uye kubvumirana neMitemo General yeBhizinesi uye tinya pasi pa "Nzvimbo Order".
Kana iwe wagamuchira imwe chete, wedzera chero mapepa coupon.
Isa yako odha uye utore zvese zvatinazvo kwauri!